Momba anay - Hebei Kanglida Metal Net Co., Ltd.
Tongasoa eto Hebei Kanglida Metalnet Co, Ltd. Ny toerana misy anay dia faritany Anping, faritanin'i Hebei, izay antsoina koa hoe "Tanànan'ny tariby" ao china. Iray amin'ireo mpanamboatra ambony sy mpanondrana entana vita amin'ny tariby sy vita amin'ny lamba tariby any Sina isika. Nanomboka tamin'ny taona 1992, dia manana traikefa eo amin'ny 20 taona eo amin'ny fanenomana tariby ny tariby.
Ny orinasa aminay dia mpanamboatra manokana ho an'ny tariby tariby sivana. Ilay orinasa dia manana faritra mirefy 56000 metatra toradroa, fambolena earea 36000 metatra toradroa, mihoatra ny fanenanan-tariby vita amin'ny tariby mazotra 230 ary mpiasa, maherin'ny 300, anisan'izany ny mpanatanteraka, teknisiana ary mpitondratelo. Vola famarotana 23 tapitrisa dolara isan-taona. Miaraka amin'ny vokatra rehetra hoentina any ivelany izahay, isan'ireo mpamokatra tampoka ny lamba tariby misy ao Shina. Ny tariby tariby tariby / lamba nomenay anay dia sokajiana ho metaly sy tsy metaly. Ny meshes tariby vita amin'ny vy dia manana vy matevina, vy vita amin'ny vy vy ary varahina varahina, sns .. Ny meshes tsy misy simika dia ny harona nylon sy ny polyesteresh. Nandritra ny 20 taona mahery niainana tamin'ny fanenona ny tariby tariby, ny fitiliana 100% ary ny rafitra fanaraha-maso ny vokatra feno dia nitarika ny tsena mitombo tsy mitsaha-mitombo any amin'ny tsenan'i Alemaina, Etazonia, Japon, Eropa, Amerika ary Azia Atsimo Atsinanana.
Fampidirana ankapobeny momba ny vokatra Wire Mesh:
Raha mankafy ny toerana ambony ao anaty vatan-tariby tariby sy lamba tenona tariby, Hebei Kanglida Metalnet Co., Ltd. dia manome vatan-dramatoa vy matevina, vy matevina vy sy vokatra tariby hafa.
Ny entona vy vy vita amin'ny vy sy ny vokatra vita amin'ny vy tariby hafa dia nafindra any Eropa, Etazonia, Moyen Orient, Azia Atsinanana, Afrika ary faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
Na dia mifantoka be amin'ny ezaka mitohy amin'ny vokatra tsara kokoa aza izahay, ny rafi-pitantanana ny kalitaonay miaraka amin'ny fanamboarana sy ny varotra ny tariby hardware dia efa neken'ny ISOQAR amin'ny fenitry ny ISO9001: 2008 tamin'ny Oct.18,2001.
Ny vy vita amin'ny vy sy ny lamba tariby dia ampiasaina betsaka amin'ny Auto, plastika sy ny fingotra, ny lamba vita amin'ny simika simika, petrochemical.
Raha liana amin'ny mamatsy tariby sy tariby lamba izahay dia ampahafantaro anay ny mombamomba ny antsipirihany. Matokia azafady fa misy hafatra avy aminao hahatongavanao tsara sy malina. Izahay dia manantitrantitra lehibe amin'ny fifandraisana am-po amin'ny mpanjifa. Raisina an-tsaina amin'ny alàlan'ny mailaka ianao na fax ny fanontanianao momba ny baiko fitsapana.
Ny fonosantsika dia maimaim-poana vita amin'ny fonon-tsolika multilayer fumigated, ary azo atao koa ny manamboatra azy
Taratasy fanamarinana ISO
Ny rafi-pitantanana ny kalitaonay miaraka amin'ny fanamboarana sy varotra ny varotra tariby hardware dia nankatoavin'ny ISOQAR amin'ny fenitry ny ISO9001: 2000 tamin'ny Oct.18, 2001. Midika izany fa afaka mahazo antoka ara-fenitra iraisam-pirenena ireo mpanjifanay ho an'ny vokatra sy serivisy novidiny taminay. . Azonao atao ny tsindrio ireo sary eto ambany raha te hahita fijery tsaratsara kokoa momba ny fanamarinana ianao.
Manararaotra ny vokatra: kalitao azo antoka, fanaterana fotoana mety, vidiny mirary ary serivisy varotra aorian'ny varotra amin'ny mpanjifa.
Ny fanavaozana ny vokatra sy ny fanatsarana kalitao no hery fototry ny fampandrosoana ny orinasa.
Ekipa R&D matihanina, foto-kevitra fitantanana siantifika ary fitaovana famokarana mivoatra mba hahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny kalitao avo kokoa.